trainride မော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ2၏3| တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: Tranride
နေအိမ် > Tranride
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပခရီးသွားဧည့်သန်းပေါင်းများစွာသောဆွဲဆောင်ကြောင်းယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ပေါများ. ကြည့်ဖို့မြင်ကွင်းများအမျိုးမျိုးရှိတယ် - ဗိသုကာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအထိမ်းအမှတအနေဖြင့်ဟောငျးကုန်းတွင်းပိုင်း၏သဘာဝအအံ့ဘွယ်သောအမှုမှ. ကနေရွေးချယ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုအတူ, ကခက်ခဲနိုင်ပါတယ်…
အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဥရောပသည်ဒါအရေးကြီး Is?
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ မဟုတ်ရှည် Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအပြီးအများအပြားဖွင့်လှစ်သည့် Eurostar ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းအဖြစ် 1994, ကခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးတွင်တဦးတည်းဟုအမည်ပေးထားသည့်ခံခဲ့ရ. မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆိုအရ, ကြောင်းခေါင်းစဉ်ကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့ခဲ့သည်. ဒါဟာထားတော်မူ၏…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သငျသညျလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ် likes သူမျိုးရှိပါသလား? သို့ဖြစ်လျှင်ဤ post ကိုသင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး! ကျနော်တို့ဥရောပရဲ့အထင်ကရက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုခေါင်မိုးပေါ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်သို့မဟုတ်ဖီးအပေါ်ရှမ်ပိန်ရင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ထင်. ဤတွင်အကောင်းဆုံးအိမ်ခေါင်မိုးအချို့ရှိပါသည်…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဆောင်းရာသီ crackling မီးလောင်မှုတည်ဆောက်ရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်, လုံခြုံစွာတောင်စောင်း hit, snowmen တည်ဆောက်ရန်နှင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ကောင်းတဲ့ခွက်ကိုအတူတက် snuggle. ကံမကောင်းသဖြင့်, ကအားလုံးကိုပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းများမဟုတ်ဘူး. ဆောင်းရာသီလည်းအများဆုံးသစ္စာပျက်သောလမ်းအခြေအနေအချို့ကိုဖန်တီးပေး. ဒါမဖြစ်နိုင်လို့ပဲ…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ တစ်ခရီးသွားပြင်သစ်သို့သွားရောက်ခြင်းဖျောပွထားလိုက်တဲ့အခါ, လူအများစုချက်ချင်းပဲရစ်စဉ်းစားမယ်လို့. သို့သျောလညျး, ပြင်သစ်မြို့တော်ဤလှပသောနိုင်ငံတွင်လာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်တစ်ခုတည်းသောမြို့မဟုတျပါဘူး, Strasbourg ဖို့ခရီးသွားလာသစ်ကို IN ဖြစ်ပါသည်. များစွာသောအခြားသောအရပ်တို့ကိုအပေါငျးတို့သလေးမွတျ၏အဖြစ်ကိုခံထိုက်သောသူများမှာ…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပတိုက်တွင်အီစတာပွဲတော်တိုင်းပြည်ကနေတိုင်းပြည်နှင့်မြို့ကနေမြို့ကိုကွဲပြား. ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်အသက်အကြီးဆုံးပွဲတော်များတစ်ဦးရဲ့. အီစတာသင်္ချိုင်းတော်မှယေရှုခရစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်. အီစတာပွဲကျင်းပတဲ့နေ့…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပခရီးအိပ်မက်ဤမျှလောက်များစွာသောများအတွက်စစ်မှန်သောရောက်လာပြီ. ထိုအသင်သည်သင်၏ပုံးစာရင်းပယ်ဤဦးတည်ရာကို tick ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်ဥရောပတိုက်တွင်အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုကြည့်ရှုဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းနေပါလျှင်, သငျသညျအဖြစ်အတွေ့အကြုံအဖြစ်အမှတ်ရစရာစေချင်ပါလိမ့်မယ်…